'२० वर्षसम्म श्रीमतीसँग बोलिन...'
23 Feb 2018 | शुक्रबार, ११ फागुन, २०७४ | Edition : Nepal | UK | Australia
शनिबार, २७ माघ, २०७४
एजेन्सी । श्रीमान श्रीमतीको झगडा परालको आगो भन्ने उखान त हामी सबैले सुनैकै कुरा हो । हुन पनि हो श्रीमान श्रीमतीको स–सानो कुरामा झगडा पर्छ र एकै छिन पछि मिलिहाल्छन् पनि ।
झगडापछि हदै भए उनीहरु केही दिनसम्म बोल्दैनन् । साह्रै भै धेरै नै ठूलो झगडा भयो भने उनीहरु अलग हुन्छन् । तर, जापानको मानिस भने श्रीमतीसँग २० वर्ष सम्म सँगै बसेर पनि कहिल्यै दोहोरो कुराकानी गरेनन् ।
यी मानिस हुन्, दक्षिणी जापानका नारा निवासी ओतोउ कातायामा । उनी श्रीमतीसँग सानो कुरामा रिसाएका थिए त्यसैको कारणले उनले श्रीमती युमी सँग २० वर्षसम्म कहिलेकाँही टाउको हल्लाउनु बाहेक एक शब्द पनि निकालेनन् । अचम्म त के छ भने उनी यो २० वर्षको समय आफ्ना तीन सन्तान र श्रीमती युमीसँग सँगै एउटै घरमा बसे ।
यो जापानी दम्पतीको मौनताको रहस्य उनीहरुका १८ वर्षका छोरा योसिकीले एक टिभी कार्यक्रमलाई पत्र लेखेर यो समस्या समाधान गर्न अनुरोध गरेपछि मात्रै खुलेको हो ।
त्यसपछि टिभीको प्रयासमा यी दुईबिच भेट गराइयो र त्यहाँ उनीहरुले पहिलो डेट गरे । त्यसक्रममा बल्ल ओतोउले आफ्नो श्रीमतीसँग बोल्दै भने, ‘कुनै किसिमले हामी कुरा नगरेको धेरै भएको त छैन् । तिमी बच्चाहरुको बारेमा धेरै चिन्तित भयौ ।’
‘युमी आजसम्म तिमीले धेरै दुःख सह्यौ, म तिमीलाई यी सबैको लागि धेरै धन्यवाद दिन चाहान्छु ।’ ओतोउले यती भनिसकेपछि युमीले पनि आफु उनीप्रति कृतज्ञ भएको बताएकी थिइन् ।
उनीहरु बिचको दोहोरो संवाद उनीहरुका तीन सन्तानहरुले नजिकै बसेर भावुक हुँदै हेरिरहेका थिए ।
ओतोउले पछि आफु किन दुखी भएको भनेर खुलाएका छन् । उनले बताएका छन् कि उनी युमीले उनलाई भन्दा धेरै माया र हेरविचार छोराछोरीलाई गरेकाले उनी रिसाएका थिए ।
उनले भनेका छन्, ‘म एकप्रकारले ईष्र्यालु भएको थिए र त्यसैले तिमीसँग रिसाए । अब हामीले पछाडि फर्केर हेर्नु हुदैँन् ।’
जाकार्ता । इन्डोनेसियाको जाभा प्रान्तमा बिहीबार गएको पहिरोमा परी ज्यान गुमाएका आठ व्यक्तिको शव उद्धारकताहरुले बाहिर निकालेका छन् ।
जनार्दन शर्मा ओली सरकारमा मन्त्रीको सूचीमा किन परेनन् ?
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले आज मन्त्री हुनेहरुको नाम सार्वजनिक गरेको छ । मन्त्री हुनेहरुको नाम सार्वजनिक गरेसँगै स्रोतका अनुसार रामबहादुर थापाले माओवादीबाट गर्ने
माओवादीबाट बादलले सरकारको नेतृत्व गर्ने, गृहमन्त्री वर्षमान
२५६ वर्षउमेर, २४ विवाह र २०० सन्तान भएका यी को हुन् !
मन्त्रीको नाम टुंगो लाग्यो: दुर्इ नयाँ, चार पूराना अनुहार
बजगाईंको नियात्रा संग्रह ‘भाया साक्रा' लण्डनमा सार्वजनिक
जन्मनुभन्दा तीन वर्षअघि नै अपराधी ठहर !
फिल्म समिक्षाः ‘पञ्चेबाजा’ नपत्याउँदो चलचित्र
आइसिपीको मूलढोकामा धर्ना, निर्माण कार्य प्रभावित
नुवाकोट, फागुन ११ । यहाँका एक नागरिक जन्मनु भन्दा तीन वर्ष अघिनै चोरी मुद्दामा दोषी ठहरिएर जेल चलान भएका छन् ।
कहिलेकाही धित मर्ने गरी रुनुहोस्ः अध्ययन
एजेन्सी । भन्छन् रुनु कमजोरीको प्रतिक हो । तर, अनुसन्धानकर्ता भन्छन् रुनु स्वास्थको लागि राम्रो हो । कहिले कामदेखि वाक्क लागेर, सुमुधुर सम्बन्ध टुट्दा तथा फिल्म हेरेर हामी रुने गर्छौ । आँखाबाट
विज्ञानका यी पाँच शक्तिशाली महिला, यस्ता छन् राेचक पक्षहरू !
असफल नहुने अचुक उपायहरु
वेइजिङ—चीनका एक ब्यक्ति पृथ्वीमा सबैभन्दा बढी उमेर बाँचेका ब्यक्तिका रुपमा चिनिन्छन् । आयुर्वेदिक चिकित्सक तथा मार्सल आर्टका खेलाडी लिचिङ युन सबैभन्दा लामो उमेर बाँच्ने मानिसका रुपमा परिचित छन् ।
विवाह गर्न र बच्चा पाउन सरकारले जनतालाई दियो यस्तो अफर
एउटा अनौठो जीव जो कहिल्यै मर्दैन
बच्चा जन्मिएको पनि प्रत्यक्ष प्रशारण !